iCloud misy olana | Avy amin'ny mac aho
iCloud dia nandia olana tamin'ny fifandraisana androany maraina
Cloud an'ny Apple, iCloud, nitranga ny maraina teo noho ny olan'ny fifandraisana ary mazava ho azy fa nisy fiantraikany mivantana tamin'ny mpampiasa rehetra izany. Raha iray amin'ireo mpampiasa ianao izay nahatsikaritra ny tsy fahombiazany tamin'ny fampiharana Photos, iCloud Keychain, sns., Io dia vokatry ny tsy fahombiazany.
Nipoitra tao amin'ny tranonkalan'ny Apple manokana ity bibikely ity ary noho izany dia azo antoka fa raha mampiasa ireo serivisy ireo ianao dia hahita olana na tsy hiasa ho anao tsotra izao. Etsy ankilany, tsy maintsy lazaina fa Apple sy ny serivisy rahona iray manontolo dia dinihina sy miasa tanteraka, farafaharatsiny izay no asehon'izy ireo ao amin'ny Malagasy.
Ny kronolojia mihitsy (sary ambony) aseho amin'ity fizarana tranonkala ity dia mampiseho amintsika ny voavaha ny olana hatramin'ny 15 hariva androany, saingy hita miharihary fa ity olana ity dia nisy fiantraikany tamin'ny mpampiasa ny maraina hatramin'ny 8 - 8:15.
Na izany aza, Apple dia manoro hevitra ireo mpampiasa rehetra izay manohy manana olana na mahatsikaritra fa tsy mandeha tsara ny serivisin'izy ireo, hifandray mivantana amin'ny serivisy teknika avy amin'ny orinasa avy amin'ny tranonkala hahitanao ny anton'ilay olana ary ahitsy izy ireo. Raha iray amin'ireo izay nanana olana tamin'ny serivisy iCloud sasany ianao androany maraina dia fantatrao izao fa a olan'ny paoma miely.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » iCloud » iCloud dia nandia olana tamin'ny fifandraisana androany maraina
SW dia hoy izy:
Eny eny, io maraina io rehefa nanokatra ny Mac aho, rehefa avy nandany alina tamin'ny fomba torimaso, dia nahita hafatra fanidiana tsy nampoizina noho ny olana lehibe iray, ary avy eo nanomboka nangataka ahy ny tenimiafina iCloud ho an'ny serivisy rehetra ... Mampatahotra izany . Nieritreritra viriosy na zavatra nitovy tamin'izany aho. Misaotra nampahafantatra anay fa milamina aho.
Apple manakaiky kokoa ny fanokafana ny fivarotana voalohany any Belzika
30% fihenam-bidy ho an'ny CleanMyMac 3